ဝန် ခံ မိ ပါ တယ် – Hlataw.com
စိတ် ထဲမှာ မျော်လင့်နေတာ ဝန်ခံမိတယ် . ဒါပေမယ့် လက်တွေကြီး ကျတော့ ကျွန်တော် စိတ်တွေ ခြောက်ချား သွားတယ် ။ ဝင့်ဝါ တဲ့ ။ လှတ ပတ ကောင်မလေး ။ ခန္တာကိုယ်က အိုးတောင့်တောင့် မဟုတ်ပေမယ့် သွယ်သွယ်လျလျလေးနဲ့ ။ ခေတ်လူငယ် ဆိုတော့လည်း အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းက ခပ်ဟော့ဟော့ ။ ဝင့်ဝါ ကိုခုမှ မြင်ဖူး သိဖူး တာလည်း မဟုတ် ။ နွေရာသီဆိုတော့ ရာသီဥတုကပူတော့ ကျွန်တော် နဲ့ မိန်းမ မေသူ ညအိပ်ယာဝင်ရင် ခြင်ထောင် မထောင်တော့ဘူး . ပူလို့. အိုက်လို့ပန်ကာလေး ဖွင့်ပြီး အိပ်ရတယ် . လေပန်ကာ ကလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်လျော်တော့ ခက်သား . အိပ်ရာဝင်ခါနီး ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ကျတော် ဆေးလိပ်ပြာခွက် ကို အိပ်ယာဘေး ချထားတယ် ။ အကျီ င်္လည်း ချွတ်အိပ်တာပေါ့ . ။ ရုတ်တရုပ် ဆေးလိပ်တို ကို ပြာချွေပြီး ပြန်အလှည့်မှာ ချစ်ဇနီးမေသူ ရဲ့ စကားလေးကြောင့် ကျတော် တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။
ကိုမြတ်အောင် က သူ့ မိန်းမဝင့်ဝါ နဲ့ အကို့ ကို ပေးလုပ်ခိုင်း မလိုတဲ့ ။ အမှန်တော့ တုတ်ကြီး ခေါ် မြတ်အောင် နဲ့ ကျွန်တော် က အလဲအထပ် လုပ်ဖို့အစီစဉ်ဆွဲ ထားတာ . မေသူ နဲ့ တုတ်ကြီး တောင် တစ်ည ဖြစ်ပြီးသွားပြီ ။ ဝင့်ဝါ ကိုတော့ ပြန်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး . မေသူ ကောက်ခါငင်ကာ ထပြောလိုက်လို့ကျွန်တော် ဝင့်ဝါ ကို ငါပြန်လုပ်ရတော့မှာ ပါလား ဆိုပြီး လိင်တံမာ သွားတယ် . ဒါနဲ့ ချစ် . . ချစ် နဲ့ တုတ်ကြီး ကဘယ်တုန်း ကတွေ့လို့ချစ်က သိတာလည်း လို့ ပြန်မေးလိုက်မိတယ် . မေသူ က ကျတော် ရင်ဘက်ပေါ် သူ့ လက်လေး တင်ပြီး . အော် ကို ဟိုနေ့ က ချစ် နဲ့ ကိုမြတ်အောင် ဟွာလုပ်ဖြစ်သွားတယ်လေ . အဲ့ဒါ သူက ချစ် ကို စွဲပြီး ထပ်လုပ်ချင်တယ် ဆိူပြီး ဖုန်းဆက်တယ် . ချစ် ကပြောထားတာကို ချစ်ခွင့်ပြုမှ အကို လက်ခံရမယ် ဆိုတာ . မေသူ ဒီစကား တွေကို ကလေးလေး လို ရှင်းပြနေလေရဲ့ . ပုံစံကလည်း ပုပုသေးသေး ဆိုတော့ ကလေး အစစ်လား ထင်ရ ။
ကျတော်လည်း အင်းလေ ချစ်ရဲ့ လို ပြန်ဖြေပေးလိုက်တယ် . သူလည်း စကားပြန်ဆက်တယ် . ချစ် ကို နောက်တစ်ကြိမ် လက်ခံပေးပါတဲ့ . သူ အကို့ ကို ပြောမယ် ဆိုပြီး သူက ပြောလာတာ . ကျတော်လည်း အဲ့ဒီတော့ ချစ်က ဘာပြန်ပြောလိုက်လည်း လို့ မေးလိုက်တော့ . . ဟာ ကို ကလည်း မေသူ ပါ အချဉ် မဟုတ်ဘူး . . မေသူ ပြောရင်း အိပ်ယာက ကုန်းထခါ ဟန်နဲ့ ပန်နဲ့ စကား ပြန်ဆက်လေရဲ့ . . . ဒီမှာ ကိုမြတ်အောင် ရှင်က တော်တော်လည်ပါလား . ရှင်ကျ ကျွန်မ ကို တစ်ခါပြီး တစ်ခါ လုပ်ချင်တယ် . ရှင့် မိန်းမကျ အကို့ ကို ပြန်မပေးဘူး . ရှင် တရားလား လို့အပြတ်ကောလိုက် တာပေါ့ . မေသူ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီး အိုက်တင် က တော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျ . ကျတော်လည်း သဘောကျပြီး ဆက်ပါအုန်း ချစ်ရဲ့ . သူက ဘာဆက်ပြောလည်း လို့ မေးလိုက်တော့ . မေသူ စကားပြန်ဆက်တယ် . မေသူ ဖြစ်စေချင်တာ ဖြစ်စေရမယ်တဲ့။
အဲ့ဒါနဲ့ ချစ်လည်း ကောင်းပြီ ကျွန်မ ယောင်္ကျားနဲ့ ရှင့်မိန်းမ ကို ပေးလုပ်ခိုင်းရင် . ကျွန်မ အကို နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ရှင့် ဆန္ဒ ကို လိုက်လျောမယ် လို့ ပြောလိုက်တာပေါ့ . ဟင်းဟင်း ကိုနော် အားမွေးထား ဆိုပြီး ကျတော် လိင်တံကို လာဆုတ်ပြီး ပြောသေးတယ် . . . ပြီးတော့ . ဟယ် ကိုနော် စကားဘဲ ရှိသေးတယ် လီးက တောင်နေလိုက်တာ . ဝင့်ဝါ ကို ဘယ်ထဲ က လုပ်ချင်နေတာလည်း ဆိုပြီး မျက်လုံး အပြူးသားနဲ့ . . . ကျတော်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားသွားတာ အမှန် ။ မေသူ ကလည်း အကိုရေ . ဒီညတော့ ချစ် ကို ဝင့်ဝါလို့ သတ်မှတ်ပြီးသာ လိုးတော့ ဆိုပြီး . ကျတော့ ပုဆိုးကို ဆွဲချပြီး ပုလွေကိုင်တော့ တာဘဲ ။ မေသူ က ပုလွေဆရာမ ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲ က ဝင့်ဝါလို့တွေးလိုက်တော့ ခံစားမှု ပိုမြန်လာတယ် . ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မေသူ့ ကိုလည်း ထိုးကျွေး ထားရတာဘဲ . ကိုလည်း တန်ရာ တန်ကြေး ပြန်ယူရမှာပေါ့ . မေသူ ခေါင်းလေး ကို ပွတ်ပြီး ကောင်းလိုက်တာ ဝင့်ဝါရယ် ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့။
မေသူ့ စုပ်ချက်တွေ ပိုမြန်လာ သလိုဘဲ . ကျွန်တော် လည်း မေသူ ကိုယ်လုံးလေး ကို ဆွဲပြီး ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ပြီး ဝင့်ဝါ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းစလိုက်တော့ . မေသူ ကလည်း သူ့ စိတ်ထဲ ကျတော့် ကို မြတ်အောင် လို့ သဘောထားမယ်လို့ကြိုပြောပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် လုံး အဲ့ည တော်တော် ဖီးလ်တက်သွားကျတယ် . လုပ်ရတာလည်း အကျေနပ်ဆုံးဘဲ ။ ကျတော် ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း . မနာပေမယ့် အား အ ကိုမြတ်အောင်ရယ် လို့အော်ပေးနေတဲ့ မေသူ့ ညီးသံတွေက မသိရင် ကျတော် စိတ်ပိုထ အောင် တမင်လှုံဆော်နေသလားဘဲ . ကျတော် ကို မြတ်အောင် အထင်နဲ့ ခံနေတဲ့ မေသူ လည်း တော်တော် ဏှာထန်နေပုံ ရတယ် . ကော့ကော့ပေးလိုက် . ကျတော့် ခါးကို အတင်းဆွဲလိုက်နဲ့ . တော်တော် မလွယ်တဲ့မေသူ ။ လူကောင်နဲ့တောင် မလိုက်ဘူး ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် တို့လင်မယား လည်း စိတ်ကူး ကိုယ်စီ နဲ့ နောက်တနေ့ ကို ရောက်လာတော့တယ် . . . ဒီနေ့အလုပ်မှာ မြတ်အောင် နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးသား။
မြတ်အောင် က သူပြန်မလိုက်တော့ဘူး . ဝင့်ဝါ စောင့်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ် . ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လည်း ဝင့်ဝါ တို့ အိမ်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ် . . . စိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နဲ့ ဘဲ ဝင့်ဝါတို့အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တယ် . အခွင့်သင့်တော့ ဝင့်ဝါ ကို အိမ်ရှေ့ခန်း မှာဘဲ တွေ့လိုက်တယ် . ကျွန်တော် နာရီပြန်ကြည့်တော့ လက်က နာရီက ရှစ်နာရီ အတိ ။ ဝင့်ဝါ လို့ ခေါ်လိုက်တယ် . ရှင် ဆိုတဲ့ ထူးသံလေး က တုန်ရီနေပြီး သူမ ကျွန်တော် ကို သရဲတွေ့သလို တုန်တက်သွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ် . ကျွန်တော်လည်း အိမ်ထဲဝင်လာပြီး ဝင့်ဝါ အပြင်သွားမလို့ လား လို့ မေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ အမူအရာတွေက အရမ်းထူးခြားနေပါတယ် . ကျတော် နဲ့ တွေ့ရင် အမြဲ ပြောင်နောက်ပြီး ပေါက်ကရပြောတတ်တဲ့ ချာတိတ်မလေး က ဒီနေ့ တော့ ငြိမ်ကုတ်နေလေရဲ့ . ဝင့်ဝါ ခေါင်းလေးငုံထားတဲ့ အနေအထား ကနေ ခေါင်းခါပြတယ် . သူမ ပုံစံက တိတ်ဆိတ်လွန်းနေပေမယ့် ထူးဆန်းနေတယ်။
အပြင်မသွားတဲ့ လူက ညအချိန်မတော် အလှတွေပြင်ထားလို့ပေါင်ဒါနံ့လေး ကလည်း သင်းနေတာဘဲ ။ ကျတော်လည်း ဧကန္တ မြတ်ကျော် နဲ့ ရန်ဖြစ်ထားတာလား လို့ မေးလိုက်တယ် . သူမ ခေါင်းလေးသာ ခါပြပြန်သည် ။ ဝင့်ဝါ ကျတော်နဲ့လုပ်မည့် ကိစ္စ ကို ရှက်ရွှံနေတာဖြစ်မယ် . စိတ်ထဲ ကလည်း မြတ်ကျော် အတင်းဖိအားပေးခဲ့တာ ဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်သေးတယ် . ကျတော်လည်း ခုလို အခြေအနေ ဆိုရင်တော့ ဆက်မလုပ်ဘဲ လှည့်ပြန်ချင်တယ် . ကျတော် အတင်းအကျပ်ဖိအား မလိုချင်ဘူး . ဝင့်ဝါ ကျေကျေနပ်နပ် ဖြစ်စေချင်တာ . ကျတော် ကောင်းဖို့ ထက် ဝင့်ဝါ ကိုလည်း အတွေ့အကြုံသစ်လေး ပေးချင်မိတာ . ဟူးးးးး ကျတော် သက်ပြင်းချပြီး ညီမရေ အကိုပြန်တော့မယ် ဆိုပြီး ကျတော် ချာခနဲ လှည့်ထွက်လိုက်တော့ . ဘယ်သွားမလို့ လည်း ကိုရဲ ဆိုပြီး ဝင့်ဝါ စကားသံလေး ထွက်လာတယ် . ကျတော် လည်း ဝင့်ဝါ ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။
ဝင့်ဝါ မျက်လုံးဝိုင်းလေး နဲ့ ကျတော် ကို ကြောင်ကြည့်နေတယ် . အမြဲ ဆက်ဆီဆန်ဆန် ဝတ်တတ်တဲ့ ဝင့်ဝါ ဒီနေ့အနီဝမ်းဆက်လေး နဲ့ အရမ်းလှနေတယ် . ကျတော်လည်း နောက်ဆုံးကျည်ဆံ အနေနဲ့ အရဲစွန့် ပြီး ပြောလိုက်တယ် . ညီမ အကို့ကို မြတ်အောင် လွှတ်လိုက်တာပါ . လို့အထာပါပါနဲ့ ပြောလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ ကလည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး ဟုတ် သိပါတယ် . ကိုရဲ . လို့ ပြန်ဖြေတယ် . ဝင့်ဝါ ဘက်က အဆင်မပြေရင် အကို နောက်ဆုတ်ပေးမှာပါ လို့ပြောပြီး ကျတော် ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ . ဝင့်ဝါ မျက်နှာလေး ရှက်ပြုံးပြုံးနဲ့ . ဝင့် အဆင်မပြေဘူးလို့မပြောသေးဘူးနော် . အကို ဘာသာပြန်တာ . ကျတော် လည်း ထင်တာနဲ့ လွဲသွားလို့ပြန်လှည့်လာပြီး ဝင့်ဝါ လက်ကလေးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး . ဒါဆို ဝင့်ဝါ လက်ခံတယ်ပေါ့ လို့မေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ ချက်ချင်း အဖြေမပေးသေးဘဲ . တစ်ခဏ ငြိမ်သွားပြီးမှ . ဝင့် မသိဘူး . ဒါပေမယ့် ရင်တွေ အရမ်းခုန်နေတယ်။
အကို့ပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့သူမ ပြောလာတယ် . ဒါနဲ့ ကျတော်လည်း ဝင့်ဝါ လက်ကို ဆွဲပြီး သူတို့အိပ်ခန်းထဲ ကို ဝင်လိုက်တယ် . . ဝင့်ဝါ ရင်တွေခုန်နေတာ အပြင်က အတိုင်းသား ကြားနေရသလိုဘဲ ။ အခုမှ တွေ့ဖူးတဲ့ လူဆို ကိစ္စ မရှိပေမယ့် ဝင့်ဝါ နဲ့ ကျတော် က လူရင်း တွေဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက် မျက်နှာတော့ ပူနေရတယ် . ကျတော်လည်း ဝင့်ဝါ ကို သိုင်းဖက်လိုက်မိတယ် . ဝင့်ဝါ လည်း ကျတော့် ခါးတွေကို ပြန်သိုင်းဖက် လိုက်တယ် . ကျတော်လည်း သူ့ နားရွက်လေး လည်တိုင်လေးတွေကို ဖွဖွလေး နမ်းပေးလိုက်တယ် . ကိုရဲ ယားတယ် . ယားတယ် ဆိုပြီး ညင်ညင်သာသာလေး ရှုန်းတော့တာဘဲ ။ ဒါပေမယ့် သူရှုန်းတာ အား လုံးဝ မပါဘူး . ကျတော် ဝင့်ဝါ က သေးသေးသွယ်သွယ်လေး ဆိုတော့ ကျတော် မချီပြီး ကုတင်ပေါ် တင်ပေးလိုက်ပြီး ။ ဝင့်ဝါ နဖူးလေး ကို နမ်းပြီး သူမ နူတ်ခမ်းမထူမပါးလေး ကိုပါ ဆက်နမ်းပေးလိုက်တယ် . ပြင်သစ်အနမ်း ကို အိမ်ထောင်သည်တွေမို့မစိမ်းပါဘူး။
ဝင့်ဝါလည်း တုန့် ပြန်ပေးတယ် . ဝင့်ဝါ က အပျိုမဟုတ်ပေမယ့် သူမ ကို အပျိုကို ပါကင်ဖွင့်သလို သဘောထားပြီး စိတ်ရှည်ရှည်လေး နဲ့ နိူးဆွပေးလိုက်တယ် . ကျတော် ဝင့်ဝါ လက်လေးတွေ က အစပြုပြီး သူမ ချိုချိုလေး ဘေးကို ရစ်သိုင်းပေးပြီး ကစားပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ မျက်မှောင်လေး ကျုံ့ ပြီး ကျတော် ကို ကြည့်နေတယ် . ဒီ အကြည့်ကို ကျတော် သိတယ် . ဝင့်ဝါ စိတ်ထဲမှာ သူမ နို့ အုံတွေကို ထိမလိုလို နဲ့ ဘာလို့ မထိသေးတာလည်း ဆိုပြီး သူမကြည့်နေတာ . အားမလို အားမရဖြစ်လာတာပေါ့ . ကျတော် တမင်တကာ ကို မထိတထိ လုပ်ပေးနေတာပါ . ငါးမိနစ်လောက် ကစားပြီးမှ ဝင့်ဝါ ရင်သားစူစူလေးတွေကို ဖြေးဖြေးလေး အုပ်ကိုင်ပေးလိုက်တော့ . ဝင့်ဝါ မျက်လုံးလေးမှေး လာတယ် . ဝင့်ဝါ အကျီ င်္ပေါ်ကနေ သူမရင်သားတွေကို ကစားပေးပြီး မှ အကျီ င်္ကြယ်သီးလေးတွေကို တစ်လုံးခြင်း တစ်လုံးခြင်း ချွတ်ပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ က တော်တော်လောတဲ့ ကောင်မလေး ဗျ ။
သူမ ကိုယ်တိုင် ကူချွတ်ပေးတယ် . ဘရာကိုတောင် သူမ လက်နဲ့ သူမ ကိုယ်တိုင်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် . ပြီးတော့ သူမ ဆံပင်ရှည်တွေကို မ တင်ပြီး အိပ်ယာပေါ် ပြန်လဲသွားတယ် . ချိုချိုခေါင်းလေးတွေ ကို ထောင်နေတာဘဲ ။ ကျတော်လည်း လက်ကလေးနဲ့ အသာလေး ဖွကိုင်လိုက် . ပွတ်ပေးလိုက် နဲ့ ကစားပေးလိုက်တော့ ဝင့်ဝါ လည်း ဖီးလ်တက်လာပုံ ရတယ် . တံတွေးတွေ မျိုချလိုက် လျှာသပ်တင်လိုက်နဲ့ . . . ကျတော် လက်တွေ ကလည်း သူမ ဗိုက်ကလေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးပြီး မှ သူမ ပေါင်လေး နဲ့ ဒူးခေါင်းလေးကို ဆက်ပွတ်ပေးလိုက်တယ် . ချိုချိုလေး ကိုတော့ ဖြည်းဖြည်းလေး စို့ ပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ ပေါင်တွေကို ထမိန်ပေါ်က ဖွဖွလေးပွတ်ပြီး အထက်ကို တက်လာလိုက် ပေါင်းရင်းနားရောက်မှ ပြန်ဆုတ်သွားလိုက်တဲ့ . သူမ ကို ကစားပေးလိုက်တော့ ဝင့်ဝါ မျက်လုံးတွေတောင် စင်းနေပြီ ။ ကျွန်တော် ကိုလည်း ပြုံးပြီး ကြည့်နေတယ် . သူ့ ယောင်္ကျားတောင် ဒီလောက်လုပ်ပေးမယ် မထင်ဘူး ။
ကျတော်လည်း ဝင့်ဝါ ထမိန်လေးကို မသိမသာလေး ဆွဲဆွဲချပြီး ဖြေးဖြေးလည်း ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် . အိုဗျာ . လှလိုက်တဲ့ ပေါင်တံတွေ . မေသူ နဲ့ ဆိုဒ်တူ ဂိုဏ်တူ ပေမယ့် ကိုယ့်မိန်းမ မို့သိပ်ရင်မခုန်ပေမယ့် . ဝင့်ဝါ နဲ့ ကျတော့ မဖတ်ရသေးတော့ အသစ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း အရမ်း ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းတယ် . ဖွေးဥနေတာဘဲ . ကျွန်တော်လည်း ဝင့်ဝါ ပေါင်တံတွေကို ပွတ်ရင်း ကနေ အတွင်းခံလေးပေါ် ပုရွက်ဆိတ်တက်သလို ဖွဖွလေး ဖြည်းဖြည်းလေး တက်ပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ အသံတွေ တုန်ရီပြီး ငိုမလို ရီမလို လေး ညီးပြတယ် . ကိုရဲ ရယ် ဆိုပြီး ကျတော် မျက်နှာကို သေချာစိုက်ကြည့်နေတယ် . သူမ မျက်ဝန်းတွေက အရမ်းကို ဆာလောင်နေပြီ ဆိုတော့ သက်သေပြနေတယ် . ကျတော် စိတ်ထဲ ကနေ ဝင့်ဝါရယ် အကိုလည်း လုပ်ချင်နေပြီ . ဒါပေမယ့် အချိန်မကျသေးဘူး ဆိုပြီး တွေးလိုက်ပြီး ကို့ တာဝန် ကို ဆက်လုပ်ပေးလိုက်တယ် . အတွင်းခံလေးကို မချွတ်ဘဲ . အပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးရင်း ဝင့်ဝါ ချိုချို ကို စို့ ပေးလိုက်တယ်။
အတွင်းခံလေး တော်တော်စိုနေပြီ . ဝင့်ဝါ အရမ်းပြင်းပြနေပြီ ဆိုတော့ ကျတော် ဝင့်ဝါ အတွင်းခံပန်းရောင်လေး ထဲ လက်ထိုးသွင်းပြီး အဖုတ် စမ်းလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ ကိုယ်လုံးလေး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားတယ် . ဝင့်ဝါ အမွှေးရိပ်ထားလို့ပြောင်နေတဲ့ ဆီးခုံမို့ မို့ လေးကို စမ်းမိသွားတယ် . ဒါနဲ့ ချိုချိုစို့နေတဲ့ ကျတော်ခေါင်းကို အောက်ကို ရွှေ့ပြီး ချက်ကလေး ကို လျှာနဲ့ ထိုးကလိပေးရင်း အတွင်းခံလေး ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ချွတ်ပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ လည်း ဒူးလေး ကွေးပြီး ကူညီပေးတော့ ကွင်းလုံးကျွတ်သွားတယ် . ဝင့်ဝါ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားပြီ ။ ကျတော် လည်း ဝင့်ဝါ စောက်ဖုတ်လေး ကို ဖွဖွလေးပွတ်ပြီး မှ ပန်းဖူးလေး ကို မထိတထိ လုပ်ပြီး ဆွပေး . လိုက်တယ် . ပြီးမှ ဝင့်ဝါ ပေါင်တွေကို လျှာလေးနဲ့ ယက်ပြီး ပေါင်ရင်း ပေါင်ကြား ကိုပါ လျှက်ပစ်လိုက်တယ် . သေချာ တိုက်ချွတ်ဆေးကျောထားလို့ဆပ်ပြာနံ့လေး စွဲနေတုန်း . ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လည်း။
ဝင့်ဝါ ပေါင်လေးတွေ ကို ကွေးပြီး ဝင့်ဝါ အဖုတ်လေးကို အလိုလျောက်စနစ်နဲ့ ဖြဲလိုက်တယ် . စောက်ပတ် နူတ်ခမ်းလေးတွေ ဟ သွားတော့ စောက်စေ့စူစူ လေးနဲ့ မအင်္ဂါပေါက်ရဲရဲ လေးကို တွေ့လိုက်ရတယ် . အရည်ကြည်လေးတွေ စိုနေတာဘဲ . ကျတော် ကိုလည်း အိပ်ချင်နေတဲ့ မျက်လုံးမျိုး နဲ့ ကြည့်နေတယ် . ယက်ပေးပါ ယက်ပေးပါ လို့တောင်းဆိုနေတဲ့ အကြည့်မျိုး . ဒါနဲ့ ကျတော်လည်း နူတ်ခမ်းသားတွေကို ချည်း ဖွဖွလေး နမ်းပြီး စုပ်ပေးလိုက်သေးတယ် . ခဏနေမှ လျာနဲ့ ထိထိမိမိ အပြားလိုက် ဖိလိုက်ပစ်လိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ အဟင့်ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်လုံး တုန်သွားတယ် . ကျတော်လည်း အပေါက်လေးနဲ့ လျာနဲ့မွှေလိုက် . အစေ့လေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်နဲ့ အပြစ် ဘာဂျာပေးလိုက်တယ် . တစ်ချိန်လုံး ငြိမ်လာတဲ့ ဝင့်ဝါ အသံထွက်လာ တော့မယ် . . မောဟိုက်သံ နဲ့ . ကိုရဲ ကိုရဲ . ကောင်းတယ်ကွာ . ကောင်းတယ် . မိုက်တယ် ဖီးလ်ဘဲကွာ . ဆိုပြီး ရဲတင်းစွာ ပြောလာတော့ ပိုလို့ တောင် လုပ်ပေးမိသေးတယ်။
သူ အရှိန်တက်ချိန် ကို မှန်းပြီး ယက်တာ ရပ်ပစ်လိုက်တော့ . ဟင် ဆိုပြီး ကျတော် ကို ပြာပြာသလည်း နဲ့ ကြည့်တယ် . ကျတော်လည်း ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီပါ ဆက်ချွတ်လိုက်တယ် . လီးကလည်း လုံးဝ ကို တောင်နေပြီ . 50 အား ဆေးကိုလည်း အကူကစ်ထားသေးတော့ ပိုကြီး လာသလိုဘဲ ။ ကျတော် လည်း ဝင့်ဝါ ကို ကြည့်ပြီး လုပ်တော့မယ် နော် ဝင့် လို့ ပြောလိုက်တော့ . ဆတ်ခနဲ ကျတော် လီးကို သူ့ လက်ကလေး နဲ့ လမ်းကိုင်ပြီး သူ့ စောက်ပတ်ဝတောင် တေ့ ပေးတော့ သမျှ . မျက်မှောင်ကျုံပြီး . ညီမလေး မနေနိူင်တော့ဘူး . လုပ် . လုပ်ဆိုပြီး ပူဆာသလိုလေးတောင် ပြောလာတယ် . ကျတော်လည်း သူ လိုချင်တာ ဘယ်ပေးမလည်း ဖြေးဖြေးလေး ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ ကလိပေးလိုက်တော့ . ဝင့်ဝါ ဝုန်းခနဲ ကုန်းထပြီး ကျတော်ကို တွန်းလိုက်တယ် . ရုတ်တရပ်ဆိုတော့ ကျတော် နောက် ဖင်ထိုင်ရပ် ကျသွားတယ် . ထင်မှတ်မထား စရာဗျာ။
ဝင့်ဝါ ကျတော် ပေါ်ခွတက်လာပြီး လီးကို ကိုင်ပြီး သူ့ ဟာထဲ အတင်းသွင်းတော့တာဘဲ . ပြီးတော့ အားကုန်ကို အတင်းဆောင့်ဆောင့်ချကာ . မျက်မှောင်ကြီးကျုံ့ ပြီး အွန်း . အွန်း နဲ့ . ကျတော့် ကိုလည်းသိုင်းဖက် ထားလိုက်တာ ကျစ်နေတာဘဲ . ကျတော် လီးတစ်ချောင်းလုံး ဝင့်ဝါ အဖုတ်ထဲ မြုပ်ဝင်နေတာဘဲ . ဆောင့်ချက်ကလည်း နိူင်း လောက်ရှိတယ် . ပါးစပ်ကလည်း ပွစိပွစိ တွေလုပ်နေသေးတယ် . ပြီးမှ . ကျတော့နားကို ကပ်ရင်း . ညီမလေး ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး . အရင်တုန်းက ဆို အရမ်းနာတာ . ကိုမြတ်အောင် နဲ့လည်း အမြဲ ပြသနာတက်နေတာ . မခံနိူင်လို့ လေ . ဒီနေ့ညီမ မနာဘူး . အား ကောင်းတယ် အကိုရာ ဆိုပြီး ဖီးလ်ကြမ်း ပါလေရော . . မေသူ က တဏှာပြင်းတော့ သိပ့်နူးစရာ မလိုဘူး . ဒါကြောင့် မြတ်အောင် အိုကေ သွားတာ . ဝင့်ဝါ က သူမ နိုးကြွဖို့အချိန်ပေးရတယ် ဆိုတာ မြတ်အောင် မသိတာ ဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်။
ဒါနဲ့ ကျတော်လည်း ဝင့်ဝါ ကို ပြန်လှဲပြီး ကျတော် အပေါ်က ဆောင့်ပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ လည်း ခါးတွေ ကော့ကော့ပေးတယ် . ဒါပေမယ့် တချက် တချက် မျက်နှာမဲ့မဲ့ပြီး အား . အမလေး ဆိုပြီး အော်အော် လာတယ် . ကျတော်လည်း ဝင့် အရမ်းနာနေလား . ဒါဆို ရပ်လိုက်မယ် ဆိုတော့ ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ဆက်လုပ်ပါ . ဆက်လုပ်ပါ ကိုရဲရယ် ဆိုပြီး ငိုမလို ရီမလို နဲ့ ပြောလာတယ် . ကျတော်လည်း ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တာ မိနစ်နှစ်ဆယ်ကျော် လာတယ် . လူလည်း ညောင်းလာပြီ . ပူလည်း ပူလာပြီ ဆိုတော့ ပြီးချင်လာတယ် . ဝင့်ဝါလည်း အင့်ခနဲ . အင်ခနဲ ငြိမ်ငြိမ်ကျသွားတာ သုံးခါကျော်လောက် ရှိလာပြီ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီ ဆိုပြီး ဝင့် ပေါင်နှစ်ဖက်ကို မ ပခုံးပေါ်တင်ပြီး ကျတော် သူ့ ပေါ် နည်းနည်းဖိပြီး စောင့်ပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ အီးအား ဖြစ်လာပြီး နာလာပြီ အကိုရ . ဒါပေမယ့် ရတယ် . ဝင့် အောင့်ခံမယ် ဆိုတော့ ကျတော်လည်း မရတော့ဘူး ထွက်ချင်နေပြီ ဟာ ဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးမိသွားတယ်။
ဝင့်ဝါ စောက်ဖုတ်ထဲ အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် . ကျတော် လည်း လီးမထုတ်သေးဘဲ ခဏ စိမ်ထားပြီး ဝင့်ဝါ မျက်နာလေး ကို မြတ်မြတ်နိူးနိူး နမ်းပေးလိုက်တယ် . ဝင့်ဝါ လည်း ကျေနပ်အပြုံးဖြင့် အကို ဒီည ဒီမှာ ဝင့် နဲ့ အိပ်နော် တဲ့ . ကျတော်လည်း ဟာ မြတ်အောင် ပြန်မလာဘူးလား လို့ မေးတော့ . ဝင့်ဝါ က တအံ့တသြ နဲ့ ပြန်ကြည့်ပြီး ကိုမြတ်အောင် က မေသူ နဲ့ အိပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ အကို မသိဘူးလား တဲ့ . စိတ်ထဲ က တွေးလိုက်မိတယ် . မေသူ . မေသူ ငါမှာ နင့်ကို စည်းရှုံးလိုက်ရတာ . ခုတော့ နင် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင် နေပါလား အထန် ကြီးရယ် လို့တွေးလိုက်ရတော့တယ် . အဲ့ည မထူးတော့ပြီမို့ဝင့်ဝါ နဲ့ အတူ ရေချိုးရင်း ရေချိုးခန်း ထဲမှာ ဝင့်ဝါ ကျတော် ကို ကျကျနန စုပ်ပေးတယ် . မေသူ လောက် မကျွမ်းပေမယ့် အရမ်းကောင်းပါတယ် . အဲ့ည ဝင့်ဝါ စောက်ဖုတ် ကိုလည်း တစ်ဝ ယက် . ကျတော့် လီးလည်း သူ တစ်ဝ စုပ် . ကြက်ဥ နဲ့ ငှက်ပျောသီးကလည်း မြတ်အောင် စီစဉ်ပေးထားလို့အလိုက်ဘဲ ။ တစ်ညလုံး လိုလို စိမ်လိုက် နားလိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်တာ သုံးချီထိ ပြီးသွားလေတော့သည် . . . ပြီးပါပြီ။